ကဆြုံးသှားတဲ့သူရဲကောငျးတှရေဲ့ သားသမီးတှပေညာရေးကိုပံ့ပိုးပွီး အလှူငှတှေလှေူဒါနျးသှားမယျ့ ကြျောထကျအောငျ – Shwe Nay Chi
ပရိသတျကွီးရေ.. အစီအစဉျတငျဆကျသူအဖွဈ Myanm ar Idol ပွိုငျပှဲကွီးကနေ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုတှနေဲ့ ဝနျးရံမှုတှကေို အခိုငျအမာရရှိခဲ့ပွီး အောငျမွငျတဲ့အနု ပ ညာရှငျတဈယောကျအဖွဈ လြှောကျလှမျးနသေူကတော့ ကြျောထကျအောငျပဲ ဖွဈပါတယျ..။
အသံသွဇာအပွညျ့နဲ့ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးတဲ့ အသံပါဝါကို ပိုငျ ဆိုငျထားတဲ့ ကြျောထကျအောငျကတော့ လကျရှိအခွအေနတှေမှောလညျး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ တဈသားတညျးရပျတညျကာ လှုပျရှားမှုတှမှော ပါဝငျနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ..။
တျောလှနျရေးတိုကျပှဲကွီးရဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော အမြားပွ ညျသူတှနေဲ့အတူ အပငျပနျးခံပါဝငျအားဖွညျ့နသေလို တတျ နိုငျတဲ့ဘကျကနလေညျး လှူဒါနျးမှုတှပွေုလုပျနပွေီး အခုတဈ ခါမှာလညျး ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျးပွညျသူတှအေတှကျ ဖေးမကူညီမှုတှကေို ပွုလုပျသှားဦးမှာပါ..။
လူထုလှုပျရှားမှုတှပွေုလုပျရငျး ဖွိုခှငျးမှုတှကွေောငျ့ အသကျပေးကဆြုံးသှားတဲ့ ပွညျသူ့သူရဲကောငျးတှရေဲ့ သားသမီးတှပေညာရေးအတှကျလညျး ငှကွေေးလှူဒါနျးပွီး ပံ့ပိုးကူညီသှားမှာဖွဈတဲ့အကွောငျးလေးကို ကြျောထကျအောငျက ပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
နာကွငျသှေးပကျြရတဲ့နတှေ့ေ…အမွနျကုနျလှနျပါစေ ??? ကတိပေးပါတယျ ဒီမိုကရစေီတိုကျပှဲမှာ ကဆြုံးသှားတဲ့ သူတှရေဲ့ သားသမီးတှေ ပညာရေးကို lifelong sup port လုပျပေးဖို့လိုတယျ မွငျမိပါတယျ။ အခွအေနတှေေ တညျငွိမျသှားရငျ ကြှနျတျောတို့မိသားစု ဝငျငှထေဲကနေ လစဉျလှူဒါနျးဖို့ ကတိပွုပါတယျ။
သဘောတူရငျ ကူးတငျလို့ရပါတယျသူတို့အနာဂတျတှေ မပကျြစဖေို့ ဝိုငျးဝနျးကွမယျနျော ???..” ဆိုပွီး ကြျောထကျအောငျက ရေးသားပွောပွထားဖွဈပွီး ပရိသတျတှကေလညျး လေးစားစှာခြီးကြူးစကားလေးတှလေညျး ပွောထားကွပါတ ယျ..။
ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ သားသမီးတွေပညာရေးကိုပံ့ပိုးပြီး အလှူငွေတွေလှူဒါန်းသွားမယ့် ကျော်ထက်အောင်
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ် Myanm ar Idol ပြိုင်ပွဲကြီးကနေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေနဲ့ ဝန်းရံမှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်တဲ့အနု ပ ညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် လျှောက်လှမ်းနေသူကတော့ ကျော်ထက်အောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
အသံသြဇာအပြည့်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ အသံပါဝါကို ပိုင် ဆိုင်ထားတဲ့ ကျော်ထက်အောင်ကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးရဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အများပြ ည်သူတွေနဲ့အတူ အပင်ပန်းခံပါဝင်အားဖြည့်နေသလို တတ် နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလည်း လှူဒါန်းမှုတြွေပုလုပ်နေပြီး အခုတစ် ခါမှာလည်း ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းပြည်သူတွေအတွက် ဖေးမကူညီမှုတွေကို ပြုလုပ်သွားဦးမှာပါ..။
လူထုလှုပ်ရှားမှုတြွေပုလုပ်ရင်း ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့် အသက်ပေးကျဆုံးသွားတဲ့ ပြည်သူ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်လည်း ငွေကြေးလှူဒါန်းပြီး ပံ့ပိုးကူညီသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကို ကျော်ထက်အောင်က ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
နာကြင်သွေးပျက်ရတဲ့နေ့တွေ…အမြန်ကုန်လွန်ပါစေ ??? ကတိပေးပါတယ် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူတွေရဲ့ သားသမီးတွေ ပညာရေးကို lifelong sup port လုပ်ပေးဖို့လိုတယ် မြင်မိပါတယ်။ အခြေအနေတွေ တည်ငြိမ်သွားရင် ကျွန်တော်တို့မိသားစု ဝင်ငွေထဲကနေ လစဉ်လှူဒါန်းဖို့ ကတိပြုပါတယ်။
သဘောတူရင် ကူးတင်လို့ရပါတယ်သူတို့အနာဂတ်တွေ မပျက်စေဖို့ ဝိုင်းဝန်းကြမယ်နော် ???..” ဆိုပြီး ကျော်ထက်အောင်က ရေးသားပြောပြထားဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း လေးစားစွာချီးကျူးစကားလေးတွေလည်း ပြောထားကြပါတ ယ်..။
မွနျမာနိုငျငံအခွအေနနေဲ့ ထပျတူထပျမြှ ခံစားလို့ရမယျ့ ကိုရီးယားတျောလှနျရေး ဇာတျကားကောငျးမြား